म्यानको व्यक्तित्व विकास तालिम
मकवानपुर । मोबाईल एशोसियसन अफ नेपाल मकवानपुर म्यानले आफना सदस्यहरुलाई एक दिने ब्यक्तित्व बिकाश तथा उद्घोषण तालिम प्रदान गरेको छ । तालिमको उदघाटन् गर्दै प्रमुख अतिथी मकवानपुर उधोग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कटुवालले ब्यक्तित्व र क्षमता अभिबृद्धीका लागी तालिम उपयोगी बन्नेमा जोड दिए । उनले म्यान मकवानपुर उधोग बाणिज्य संघको...
विवाहित महिलाले किन गरिन राजुको हत्या ?
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–१८, कटानमा एक महिलाले पुरुषको चक्कु प्रहारबाट ज्यान लिएकी छिन् । कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएका २५ वर्षीय राजु बोहराको चक्कु प्रहार गरी हत्या गरिएको हो । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–२, देहीमाण्डौँ घरभएका बोहरासँग एक महिनादेखि बस्दै आएकी कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–३, चटकपुरकी ३० वर्षीया...
नर्स किन आन्दोलनमा ?
मकवानपुर । नेपाल नर्सिङ संघ मकवानपुरले ११ बुँदे माग आज १ घण्टा धर्ना कार्यक्रम गरेको छ । हेटौडा अस्पतालमा हातमा कालो पट्टी बाधेर एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम भएको हो । ‘अधिकार सहितको नर्सिङ सेवा महाशाखा पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने, नीजि स्वाथ्य क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरुको तलव, भत्ता सेवा सुविधा नेपाल सरकारका नर्स सरह उपलब्ध गराइयोस्,...
डा. केसीको पक्षमा हेटौंडामा यस्तो प्रदर्शन
मकवानपुर । डा. गोविन्द केशीलाई विनासर्त रिहाईको माग गर्दैै मकवानपुरको हेटौंडामा प्रदर्शन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको मानहानीको आरोपमा अनशन स्थलबाटै पक्राउ गरिएका डाक्टर केशकिो समर्थनमा हेटौंंडामा प्रदर्शन गरिएको हो । विभिन्न पेशामा आबद्द युवाहरुले हेटौंडाको बुद्दचोकमा आज प्रर्दशन गरेका हुन् । केशीको समर्थनमा हेटौंडाको...
मकवानपुर । लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो भनिन्छ । तर कहिलेकाही यसो नहुँदो रहेछ । दिनहुँजसो भइरहने झगडाले कसैको ज्यान जानसक्न भन्ने दुःखद स्थिती हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा भएको छ । हेटौंडा ४ कर्रामा श्रीमानले श्रीमतीको हत्या गरेका छन् । ४२ वर्षकी मीना लामालाई ६३ वर्षीय श्रीमान रामबहादुर लामाले धारिलो हतियार प्रहार गरि हत्या गरे...
दाहाल प्रतिष्ठान मकवानपुरको अधिवेशन, नेतृत्व बालकृष्णलाई
मकवानपुर । दाहाल प्रतिष्ठान मकवानपुरको छैठौं अधिवेशन तथा वार्षिक साधारणसभा आज हेटौंडामा भएको छ । सांसद कृष्णप्रसाद दाहालको प्रमुख आतिथ्य एवम् बालकृष्ण दाहालको अध्यक्षतामा भेला भएको हो । कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका केन्द्रिय अध्यक्ष शालिग्राम दाहाल,बुद्दिजिवी परिषदका सदस्य किशोर दाहाल, प्रतिष्ठान मकवानपुरका पूर्व अध्यक्ष...
मकवानपुर । नेपाल रेडक्रस सोसाईटी मकवानपुर शाखाले पालुङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्वास्थ्य जन्य सामग्री सहयोग प्रदान गरेको छ । एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिपकसिंह लामालाई रेडक्रसले सामाग्री हस्तान्तरण गरेको हो । स्वास्थ्य केन्द्रको लागि आवश्वक सेन्ट्रीफ्युज मेसिन,...
मकवानपुर । थाहा नगरपालिका वडा नं १० को चित्लाङ कलाँटु स्थित स्थानिय ब्यक्तिहरुको सहकार्यमा सडक बाटो खनेका छन् । सामाजिक विकासमा सबै एकजुट भएपछि रकम संकलन गरि बिकास निर्माणको कार्य सुरु गदै कलाटुबासीले उदाहरणीय कार्य गरेका हुन् । आवत आवतमा समस्या भएका कारण स्थानिय सिद्धिकुमार गमालको परिकल्पना अनुसार सडक निर्माण कार्य सूरु भएको हो...